China NPT MALE eriri ulo oru sooks na ọkpọkọ akwa akwa Manufacture and Factory | Topa
NPT industriallọ ọrụ mmepụta ihe na ọkpọkọ ọkpọkọ
Nodị No.: 15611 RW
Nrụgide: Nnukwu nrụgide
Eriri Type: Eriri Mpụga
Echichi: Uwe aka uwe
Ụdị: Ndị ọzọ, Otu Ibe sooks Fittings
Isi Usoro: Hegzagon
Ngwa: Industrial sooks Ma Pipe Fittings
Udi: Ngwunye Hydraulic Union
Akara: NPT nwoke sooks Pipe Fittings katalọgụ, Kwụ Ọtọ
Product aha: Ihe ndozi nke Parker Hydraulic Union na Adapters
Ahịa: Topa sooks Pipe Fittings katalọgụ
Ebe Mmalite: 1 Inch Hose Pipe Fittings si China
Tụkwasịnụ Ikike: 500000 PC Fittings na nkwụnye kwa ọnwa
Akwụkwọ: Industrial sooks na Pipe Fittings ISO
TOPA haịdrọlik na-ekwusi akụrụngwa zuru ezu nke akwa sooks na ọkpọkọ ọkpọkọ dị njikere ụgbọ mmiri iji gboo mkpa gị. Anyị na-ere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ niile na-etinye ike mmiri. Anyị ga-agbakọ 1 nke anụ ọhịa anyịSooks Pipeakwa akwa maka nnyefe dabere na ihe ị chọrọ, ọ ga-ekwe gị nkwa mbupu ụbọchị niile maka ngwaahịa ngwaahịa niile. TOPA Hydraulic ga-eme ihe ọ bụla iji gboo mkpa ndị ahịa anyị na-arịwanye elu.
ulo oru sooks na anwụrụ oyiyi akwa Foto:
ulo oru sooks na anwụrụ oyiyi akwa datas:
3/4 × 14
1 × 11-1 / 2
1-1 / 4 × 11-1 / 2
1-1 / 2 × 11-1 / 2
2 × 11-1 / 2
Nwoke NPTF Pipe - isiike
Ngwaọrụ anyị na nke ọkpọkọ maka ngwongwo maka nnyefe dabere na ihe ị chọrọ ma ga-ekwe nkwa mbupu otu ụbọchị maka ngwaahịa ngwaahịa niile.
TOPA Hydraulic pụrụ iche na-erigbu, n'ichepụta ma na-ere mmiri eruba systerm. Industrial sooks na Pipe Fittings agụnye: All iche iche nke haịdrọlikSooks Fittings, nkwụnye, Hydraulic sooks, High Pressure sooksmgbakọ na akụkụ ọla ndị ọzọ, yana ndị ọrụ maka ngwaahịa njikọ njikọ mmiri. Anyị na-enyekwa ọrụ OEM.
A na-ejikarị ihe eji eme ihe ndị a na Hose na Pipe na aerospace, ụgbọ ala, ụgbọ mmiri, ọgwụ, kemịkal, mmanụ ala na mpaghara ndị ọzọ.
Industrial sooks na Pipe Fittings ọtụtụ-eji na haịdrọlik na ọmụmụ erute ststem nke ígwè, oilfield, m, ụlọ, njem na ndị ọzọ ọrụ.
1. Advanced mmepụta akụrụngwa / Advanced mmepụta akara na technology
2. Nzaghachi n’ime awa iri na abụọ
3. Ndị injinia na ndị ahịa a zụrụ azụ ma zụọ nke ọma
4. Na-akwado ndị ahịa 200 OEM na Europe na North America
5. na ikike anyị nwere kwa ọnwa nke ngalaba 200,000
6. Anyị ga-eji ahụmịhe OEM nke afọ 20 anyị were jikọta atụmatụ ị chọrọ 7. Ndị ọkachamara na ahụmịhe na ahụmịhe na ngwaahịa na ọrụ mbupu
8. Trade nkwa ọrụ, nchebe echebe buyers` ugwo
9. More asọmpi price dabere na otu àgwà larịị ngwaahịa
10. Igwe igwe klas mbụ nke akwadoro na nkwado teknụzụ yana ndị ọkachamara 40.
Q: you bụ Industrial sooks na Pipe Fittings trading ụlọ ọrụ ma ọ bụ emeputa?
A: Anyị bụ ndị na-emepụta ihe mmepụta ihe nke Industrial Hose na Pipe Fittings na ụlọ ọrụ anyị na Shijiazhuang.
Q: Ogologo oge ole ka oge nrụpụta ọrụ Industrial na Pipe Fittings?
A: N'ozuzu ọ bụ 2-10 ụbọchị ma ọ bụrụ na Industrial sooks na Pipe Fittings dị na ngwaahịa. ma ọ bụ ọ bụ 20-40 ụbọchị ma ọ bụrụ naNgwunye Hydraulic adịghị na ngwaahịa, ọ bụ dị ka nke ukwu.
Ajụjụ: you na-enye ndị ọrụ mmepụta ihe nke Hose na Pipe Fittings? ọ bụ n'efu ma ọ bụ mgbakwunye?
A: Ee, anyị nwere ike ị nye ndị ọrụ Hose na Pipe Fittings sample maka akwụghị ụgwọ, ụgwọ ibu bụ maka akaụntụ gị. Ọ bụrụ na ị nye iwu, anyị nwere ike ịlaghachi ụgwọ ụgwọ.
A: Paykwụ <gwọ <= 1000USD, 100% n'ọdịnihu. Kwụ >gwọ> = 1000USD, 30% T / T tupu, itule tupu shippment.
Ajụjụ: you nwere ike ịhazigharị ihe eji eme ụlọ ọrụ na ọkpọkọ maka ndị ahịa gị?
A: Eeh, ndi ahaziri ime bu otu ulo oru anyi.
Q: you ga - eme nyocha 100% tupu Mbupu Industrial Hose na Pipe Fittings Mbupu?
A: Anyị QC ga-eme 100% nnyocha na anyị ga-100% na-ekwu ma ọ bụrụ na nkwarụ.
Na-achọ ezigbo 1 Inch Sooks Pipe FittingsEmeputa & soplaya? Anyị nwere nhọrọ dịgasị iche iche na nnukwu ọnụ ahịa iji nyere gị aka ịmepụta ihe. All nke sooks sooks na Pipe Fittings bụ àgwà na-ekwe nkwa. Anyị bụ ndị China Mmalite Factory nke sooks Pipe Fittings katalọgụ. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
Ngwaahịa: Hydraulic Hose Fitting> Otu Ibe Hose Fitting
Nke gara aga: Ekwekọ na-enweghị ntụpọ karama gas
Osote: Steel Bsp haịdrọlik oyiyi akwa maka ire ere
Nipple dị ọcha ọla kọpa Reusable sooks kwesịrị ekwesị
Breeki elu nsogbu haịdrọlik sooks ọgwụgwụ ikuku fitt ...
obere haịdrọlik ígwè sooks usoro traktị
Hydraulic crimper jic oyiyi akwa chaatị threaded h ...
Ngwa ngwa jikọọ sooks pneumatic sooks sooks valvụ